Vokatry ny ora-mikija : olona telo no maty 23.352 ny traboina | NewsMada
Vokatry ny ora-mikija : olona telo no maty 23.352 ny traboina
Nizaka ny ora-mikija, rivotra nifofofo ary rano niakatra iny tapany avaratry ny Nosy iny, ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny maty, marobe ny traboina, tapaka ny lalana, dibo-drano ny tanimbary, sns.
Nandravarava tany amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny ny ora-mikija sy ny rivotra nifofo nentin’ilay andro ratsy tamin’iny herinandro iny. Raha ny tatitra farany nalefan’ny BNGRC, tafakatra telo ny olona maty ary 23.535 ireo traboina.
Anisan’ny nahitana olona maty ny tao amin’ny kaominin’i Mampikony, fokontanin’i Tsararivotra. Iray maty koa tao amin’ny kaominin’Ankizihiry fokontanin’i Betainomby. Iray hafa ny tao amin’ny kaominin’Ambesisika, distrikan’Ambatoboeny.
Anisan’ny tena voa mafy ny faritra Sofia sy Boeny. Nahatratra 15.485 ireo olona tsy maintsy nafindra toerana. 4.492 ny trano dibo-drano tanteraka ary maherin’ny 23.976 ha ny tanimbary tondraky ny rano ary potika ny voly.
Misy ihany koa ny tetezana sy lalana tapaka noho ny ranobe ary ny faritra mitoka-monina vokatry ny haratsian’ny lalana. Ankoatra izany, miakatra ny voay amin’ny faritra sasany noho ny fiakaran’ny rano ka miteraka horohoro ho an’ny mponina.
Raha ny tatitry ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby, efa nivoaka ny ranomasina ilay faritra andro ratsy mitondra raho-matevina ka miteraka orana any amin’ny tapany avaratry ny Nosy. Mbola mila mitandrina kosa anefa ny ao Antsiranana satria heverina ny hitohizan’ny orana ao anatin’ny telo andro misesy na dia eo aza izay fisintahan’ny faritra andro ratsy izay.
Nidina any an-toerana ny BNGRC nitondra vary milanja 40 taonina mahery sy voamaina 40 taonina hamatsiana ireo traboina. Anisan’ny tena filana fototra ihany koa anefa ny rano madio hosotroina, fanafody, lay misy odimoka, lakana, kojakojam-pampianarana….
Nidina nijery ny zava-misy ihany koa ny filoham-pirenena niaraka tamin’ny ekipany ny asabotsy teo. Nitondra tranolay, vary, voamaina ihany koa izy ho an’ireo traboina.
Marihina fa ho an’ny mponina any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy kosa, mipetraka ny filazana fampitandremana ho an’ny ao Morombe sy Farafangana hatramin’ny asabotsy teo. tsy tokony hatao ny miandriaka ho an’ireo mpanjono sy mpitatitra an-dranomasina noho ny hamafin’ny fitsokan’ny rivotra.